Ntughari gị na-enyocha nyocha na ntụkwasị obi | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 6, 2012 Douglas Karr
Adị m afọ iri anọ na anọ ugbu a, ana m echetakwa nne na nna m na nne na nna m ochie na-ekwu na ha ahụtụbeghị ntuli aka jọgburu onwe ya… na ntuli aka ọ bụla. Ekwenyeghi m na ntuli aka na-akawanye njọ, echere m na ihe nwere ike ịbụ na anyị na-esikwu ike na nkwenkwe anyị ma anyị anaghị ekwe ka slide dị ukwuu. Achọpụtara m na m na-enyocha ihe okwu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị karịa karịa ka m na-emebu, ọ na-atụ m n'anya na enwere ego ntụgharị.
Afọ iri abụọ gara aga, enweghị m ike ịchọ na Youtube wee hụ ezigbo ọnụego ma ọ bụ tụgharịa na Wikipedia iji hụ nkọwa nke ntụgharị. Taa, m na-eme ya site na iPad m ka m nọ ọdụ n'ihe ndina na-ekiri ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ana m eme ya n'ihi na ntụgharị ha na-eme ka enyo m enyo. Ọ bụrụ na m tụkwasịrị obi ha, echeghị m na m ga-abụ eziokwu-na-enyocha ha na ezigbo oge. Otu iwu ahụ metụtara azụmahịa gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Isi okwu bụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị na-anwa ijide ya izu okè nke ahụ bụ ihe a na-ahụkarị ọtụtụ iri afọ gara aga na enwere ike ijide ya na mgbasa ozi. N'ime oge okirikiri ozi 24 a na ndị na-edekọ vidiyo na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji ọ bụla nke ụbọchị, akara ahụ anaghị enwe ohere. Ihe si na ya pụta bụ na a na-ekwughachi ihe ọhụụ ọ bụla site na saịtị mmegide na ọdụ ndị na-erute n'akụkụ ọ bụla nke ụwa. Ọ bụghị ihe ijuanya, dị ka Gallop si kwuo, nke ahụ naanị 1 onye n'ime ndị America 10 kwadoro nke ọrụ nzuko omeiwu.
Ihe bụ nsogbu bụ na ụmụ mmadụ na-emehie emehie na ezughị okè. Yabụ ka ahịa ahịa nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abawanye, nyocha na ntụkwasị obi nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ na-abawanye n'ọtụtụ dị elu. Okwu ndoro ndoro-ndoro ahia na ahia ahia di nkweko. Mgbasa ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enyocha ndị na-ege ntị, na-eme ka okwu sụgharịa, klaasị hyper-target na mpaghara na akụ na ụba. Na-ada ụda dị ka ndị ahịa.
Enwere ihe mmụta nye ndị na - ere ahịa na nyocha na nkwenye nke ndị ndọrọndọrọ ọchịchị. Ka ị na - emewanye ngwa ahịa nke ngwaahịa na ọrụ gị, ọ ga - eme ka ọ bụghị naanị na ị ga - ehichapụ aha gị… ị ga - ebibi ya. Ka ị na-erekwu ahịa ị na-etinye, ọ ga-eme ka enweghị ntụkwasị obi na nyocha ka ukwuu. Ọbụna na ndị ahịa anyị, ana m echekarị mgbanwe m na atụmanya m. Agbaghara ihe mgbaru ọsọ ga - agbaghara gị. Gha ụgha banyere ihe mgbaru ọsọ agaghị adị.
Epkpụrụ nke Testing ọdịda Page